१० प्रतिशत बोनसपछि नेको इन्स्योरेन्सको मूल्य कति ?
काठमाडाै‌ । नेको इन्स्योरेन्सले गतबर्षको नाफाबाट दिन लागेको १० प्रतिशत बोनसका लागि आज शेयर खाताको मूल्य समायोजन भएको छ । हिजोसम्म कम्पनीको शेयर किताब खातामा नाम भएकाहरुले उक्त बोनस पाउनेछन् । आज मूल्य समायोजनपछि कम्पनीको शेयरमूल्य ९५० रुपैंया कायम भएको छ । हिजो उक्त कम्पनीको अन्तिम मूल्य १०३८ रुपैंया थियो । ...
एनबी इन्स्योरेन्सको नाम फेरिने, ग्लोबल इन्स्योरेन्स रहने सम्भावना, साधारणसभा असोज १० गते
काठमाडौं । एनबी इन्स्योरेन्सले हकप्रद शेयर निष्कासन, अधिकृत पुँजी परिवर्तन, कम्पनीको नाम तथा लोगो परिवर्तन तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलबभत्ता वृद्धि प्रस्तावसहित आफ्नो २० औ साधारणसभा बोलाएको छ । असोज १० गते ११ः०० बजे लैनचौरमा बस्ने सभामा इन्स्योरेन्सले १०ः८ अनुपातमा हकप्रद दिने प्रस्ताव गर्नेछ । त्यस्तै अधिकृत पुँजीलाई २ अर्ब...
हकप्रद र बोनसको प्रस्ताव पारित गर्न नेपाल इन्स्योरेन्सकाे साधारणसभा ३० गते बस्दै, शेयर कारोबार बिहीबारदेखि बन्द गरिने
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्सले भदौ ३० गते हुने ६७ औं र ६८ औ साधारणसभामा शत प्रतिशत हकप्रद शेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांसको विशेष प्रस्ताव लैजाने भएको छ । बीमा समितिको निर्णयअनुरुप चुक्ता पुँजी १ अर्ब पुर्याउने अभियानस्वरुप भएपछि इन्स्योरेन्स सञ्चालक समितिको गत बिहीबार बसेको बैंठकले उक्त निर्णय गरेको जनाइएको छ । उक्त साधारणसभाका लागि...
एनबी इन्सुरेन्सको शेयर लीलामीमा, ८ दिनको समय
एनबी इन्स्योरेन्समा पछिल्लो समय आईएमई ग्रुपका सञ्चालकहरुको लगानी भित्रिएको छ । काठमाडौं । एबी इन्सुरेन्सले सर्वसाधारण समूहको २८ हजार ५८० कित्ता शेयर लीलामीमा बिक्री गर्ने भएको छ । सो कम्पनीले आगामी भदौ १४ गतेबा भदौ २२ गतेसम्ममा यस्तो शेयर बिक्री गर्ने भएको हो । न्यूनतम रु. १०० मूल्य कायम गरी न्यूनतम १०० कित्ता शेयर उठाउनुपर्ने कम्पनीले...
प्राइम लाइफले चार बर्षको साधारणसभा एकैपटक गर्दै, बोनस र हकप्रदसम्बन्धी यस्ता छन् प्रस्तावहरु
काठमाडौं । बीमा समितिले आफू मातहतका बीमा कम्पनीहरुलाई चालु आर्थिक बर्षभित्र अनिवार्य रुपमा पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि ४ बर्षदेखि साधारणसभा हुन नसकेर रोकिएको प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्सको चारओटै बार्षिक साधारणसभा एकैपटक हुने भएको छ । इन्स्योरेन्स सञ्चालक समितिले यहि भदौ २७ गतेका लागि उक्त साधारणसभा बोलाएको छ । हाल ४८ करोड...
सूर्या लाइफले गर्यो साधारणसभा घोषणा, बोनसपछि हकप्रदको यस्तो छ विशेष प्रस्ताव
काठमाडौं । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले साधारणसभाको मिति घोषणा गरेको छ । सो कम्पनीले यही भदौ २७ गतेलाई नवौँ साधारणसभा मिति घोषणा गरेको हो । साधारणसभा उद्योग संगठन मोरङको सभाकक्ष, शहीदमार्ग तीनपैनी। विराटनगरमा हुने तय गरिएको हो । साधारणसभाले १० प्रतिशत बोनस प्रदान गर्ने र त्यसपछि कायम हुने शेयरमा ४० प्रतिशत शेयर हकप्रद शेयर प्रदान...
६०० प्रतिशत हकप्रद दिने एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको यस्तो रह्यो आम्दानी
काठमाडौं । चुक्ता पूँजीको ६०० प्रतिशत हकप्रद शेयर दिने घोषणा गरेको एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सो इन्स्योरेन्सले गत आवको अन्त्यसम्ममा ४ करोड ५५ लाख खुद नाफा गरी प्रतिशेयर ३७ रुपैयाँ ५२ पैसाको आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो आवमा सो इन्स्योरेन्सले २ करोड ८१ लाख कमाएको थियो । सो कम्पनिको चुक्ता पुँजी १२ करोड...
ईपीएसमा उत्कृष्ट बन्यो लुम्बिनी, चुक्ता पुँजीको करिब आधा खुद मुनाफा(कति दिन सक्छ बोनस)
सो कम्पनीले तोकिएको पुँजी पुर्याउन आफ्नो हालको पुँजीमा करिब २५० प्रतिशत पुँजी थप्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौं । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले देशका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा उत्कृष्ट नाफासहितको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सो इन्स्योरेन्सले गत आवको अन्त्यसम्ममा १९ करोड रुपैयाँ बढी खुद नाफा कमाई प्रतिशेयर ४८.९७ रुपैयाँ आम्दानी...
नेपाल इन्स्योरेन्सको मुनाफा दोब्बर, ईपीएस ३७ रुपैंया हुँदा अन्य प्रगति यस्तो
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी २८ करोड ७६ लाख हुँदा कम्पनीले खुद ११ करोड २० लाख रुपैंया खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ यो प्रतिशेयर ३७.०९ रुपैंया हो । इन्योरेन्सले गत आर्थिक बर्षमा खुद ५ करोड ५८ लाख मुनाफा कमाउँदा यो बर्ष...
शिखर इन्स्योरेन्सको यस्तो विवरण, गत वर्ष ६० प्रतिशत बोनस दिएको कम्पनीले अहिले के गर्ला ?
त्यसका अतिरिक्त कम्पनीले एफपीओ निष्काशनबाट समेत प्रशस्त प्रिमियम संकलन गरेको थियो । काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्सले आफ्नो वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको छ । इन्स्योरेन्सले ८१ करोड ७६ लाख चुत्तःा पूँजी रहेकोमा ३७ करोड ५८ लाख खुद नाफा कमाई प्रतिशेयर ४५ रुपैयाँ बढीको आम्दानी गरेको छ । कम्पनीको जगेडा कोषमा ३० करोड रुपैयाँ तथा ६४ करोड रुपैयाँ...
नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सको नाफामा ७३ प्रतिशतको वृद्धि
काठमाडौं । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो खुद नाफामा अघिल्लो बर्षको तुलनामा ७३ प्रतिशत वृद्धि हासिल गरेको छ । इन्स्योरेन्सले विमाङ्कीय मूल्याङ्कन भन्दा अघिको नाफामा उक्त वृद्धि हासिल गरेको हो । अघिल्लो बर्ष इन्स्योरेन्सले बिमाङ्कीय मूल्याङ्कन अगाडि २४ करोड ४ लाख ६१ हजार रुपैंया खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो । यो बर्ष उक्त नाफा...
२५ प्रतिशत बोनस घोषणा गरेको प्राइम लाइफको शेयरमा एकैदिन ११५ अंकको गिरावट !
काठमाडौं । ४ वर्षदेखि रोकिएको साधारणसभा एकैपटक गरी २५ प्रतिशत बोनस दिने प्रस्ताव गरेको प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयरमा आज ११५ अंकको गिरावट आएको छ । आज धेरै कारोबार भएका ५ बीमा कम्पनीहरुमध्ये अन्य सबैको कारोबार मूल्यमा केही सुधार हुँदासमेत प्राइम लाइफको मूल्यमा भने गिरावट आएको हो । आज उच्च कारोबार भएकामध्ये प्रभु इन्स्योरेन्स तथा...
जीवन बीमा कम्पनीको मूल्य निर्धारणमा ‘ब्राण्डिङ वर्चश्व’, नेटवर्थको २० गुणासम्म बजार मूल्य(कुन कम्पनी कस्ता ?)
काठमाडौं । पछिल्लो समय बीमाको बजार निकै चलायमान भइरहेको छ । उच्च मूल्यमा कारोबार भइरहेका बीमा कम्पनीहरुले पछिल्ला दिनमा उच्च कारोबारकर्ताको सूचीमा पनि आफ्नै नाम दर्ज गराउँदै आएका छन् । यीमध्ये जीवन बीमा कम्पनीहरुको आकर्षण पनि उत्तिकै बढ्दो छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुको शेयरमा आकर्षण भए पनि ती कम्पनीहरुको सूचक भने आकर्षित रहेको पाइँदैन ।...
शेयरबजारमा इन्स्योरेन्सको कारोबार र मूल्य बढेको बढ्यै, किन र कहिलेसम्म ?
१ हप्ताको बीचमा बीमा समूहको सूचक ८४४७ बाट बढेर ९२६८ पुगेको छ अर्थात् ८२१ अंकको वृद्धि हुन पुगेको छ । काठमाडौं । पुँजीबजारको सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने बैंकिङ समूहलाई पछि पार्दै पछिल्ला दिनमा बीमा कम्पनीहरुको ट्रेडिङ सर्वाधिक हुन थालेको छ भने ट्रेडिङसँगै बीमा समूहको मूल्यमा पनि दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ । साताको पहिलो दिन आइतबार...
सबै बीमा कम्पनीकाे शेयरमूल्य बढ्दा यी दुर्इ कम्पनीकाे काराेबार नै भएन, एउटै कम्पनीकाे शेयरमूल्यमा ५०० रुपैंयाकाे वृद्धि
काठमाडौं । आइतबार शेयर बजारमा कारोबार भएका २२ कम्पनीहरुमध्ये सबै कम्पनीहरुको शेयर मूल्यमा भारी बृद्धि भएको छ । बीमा समूहको शेयर परिसूचकमा २७५ अंकको वृद्धि भएको आइतबारको बजारमा सबैजसो कम्पनीहरुको हुँदा सबैले दोहोरो अंकको मूल्य कमाएका छन् । सरकारी लगानीमा सञ्चालित निर्जीबन बीमा कम्पनीको मूल्य ५०० अंकले बढेको छ भने लुम्बिनी जनरल...
माइक्रोफाइनान्सको चुक्ता पुँजी कम्तीमा १० करोड
बजारमा आकर्षक शेयरको लहर, लघुवित्तकै १८ करोडको आईपीओ
कामना सेवा विकास बैंकको खाताबाटै रकम गायब
पारस खड्का आइसीसीको ९० औं बरियतामा, अरु कतिमा ?
काँग्रेसको अबको एजेन्डाः न्यायपालिकाको रक्षा
नाडेप लघुवित्तको ४ लाख ८० हजार कित्ता आईपीओ स्वीकृत, कहिले आउने ?
नेपाल सेवाको आईपीओ, ९२ प्रतिशतलाई रित्तो हात
नेपाल बैंकको एफपीओ हौवा, सर्वसाधारण फस्ने कि बिक्री प्रबन्धक ?
राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)काे केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान, राष्ट्रवादी एकताको बारेमा ठाेस छलफल हुने
राप्रपा एकतालाई अन्तिम धक्का दिन 'नयाँ पुस्ता' अग्रसर
आफ्नो डिम्याट खातामा रहेको शेयरबारे घरमै बसेर कसरी जानकारी पाउने ?
काठमाडौं । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, सिडिएस एण्ड क्लियरिङले शेयर लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी डिम्याट गरिएका...
५८ प्रतिशतमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एफपीओ आउँदै, आवेदन गरेको कति प्रतिशत पाइन्छ त शेयर ?
नेपाल लाइफको एफपीओ खुलिसकेको अवस्थामा आएको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एफपीओमा कतिको आकर्षण रहला त ? भन्ने...
सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सको आर्इपीओ १८ गतेदेखि, भर्नलाई ४ दिन म्याद
काठमाडौं । सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सकाे प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) यही असाेज १८ गतेदेखि खुल्ला...
सभापति देउवाको ‘डिना’ प्रेमले आरजू सशङ्कित, दरबारतिर ध्यान दिँदा घरबार बिग्रने चिन्ता
काठमाडौं । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जतिजति राजनीतिक उचाइ हासिल गरिरहेका छन् उनको घरभित्रको आन्तरिक...
यस्ता छन् ८ अर्ब पुँजी पुर्याउन वाणिज्य बैंकका पुँजी योजना, धेरैमा बोनसकै बिगबिगी, यी अझै अलमलमा
हालसम्म २ वटा मात्रै वाणिज्य बैंकले चुक्ता पुँजी पुर्याएका छन् भने २६ वटामध्ये एउटाले ७ अर्ब, ३ वटाले ६ अर्ब पुँजी...
नेपाल ग्रामीण विकास बैंकको एफपीओ मंगलबारदेखि खुल्ने, ५० कित्ताभन्दा बढी हाल्ने मुर्खता नगर्नुस्
काठमाडौं । एक सय रुपैंयाको शेयरमा कुनै पनि प्रिमियम मूल्य समावेश नगरी नेपाल ग्रामीण विकास बैंकले मंगलबारदेखि ९...
नेपाल लाइफको ‘मालामाल’ अफर, एफपीओ पर्नेलाई तत्कालै बोनस, एफपीओको मूल्य प्रतिकित्ता ११३० मात्रै !
मानौँ कि कुनै लगानीकर्तालाई १० कित्ता एफपीओ शेयर पर्यो, सो बापत उसले थप २.६ कित्ता शेयर प्राप्त गर्न सक्दछ...
राष्ट्रियसभामा कसको कति सीट ? यस्ताे निस्कियो हिसाब
काठमाडौं । एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने भएपछि काँग्रेसले ७ प्रदेशबाट छनौट हुने...
वर्षको उत्कृष्ट बोनसदाता एभरेष्ट बैंकबाट यस्तो घाटा, १०० प्रतिशत बोनसपछि के होला स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको ?
अन्य वाणिज्य बैंकहरुको बजारमूल्य १५०० भन्दा कम रहँदा समेत सो बैंकको पछिल्लो बजारमूल्य प्रतिकित्ता २२७९ रहेको छ...
© 2019 All rights Reserved to nigarani.com